Baaritaan lagu hayo Fiidiyowga 'Askar tooganaysa qof Falastiini ah' - BBC News Somali
Image caption Ninka dhexe ayaa shiishka lala helay, arrintaasoo keentay in milaterigu ku dhawaaqo baaritaan.
Milateriga Israa'iil ayaa sheegay inay baarayaan muuqaal fiidiyow ah oo laga duubay doorobinka wax lagu shiisho oo ku rakibnaa qori, muuqaalkaas oo qabtay, askar reyn-reynaysa ka dib markii toogasho lala helay qof falastiini ah oo aan hubaysnayn.
Fiidiyowga oo Internetka aad ugu baahay, lagana daawaday TV Israa'iil laga leeyahay, ayaa dhaleeceeyey siyaasiyiinta Israa'iil.
Fiidiyowga oo Isniintii la baahiyey, ayaa waxaa aka muuqday 3 nin oo u soo dhawaanayey darbiga xudduudda. Dhawaaqa xabadda ayaa la maqlay, ka dibna mid ka mid ah raggaas oo ahaa kii dhexda ku jiray, oo u muuqday inuusan hubaysnayn oo uu taaganaa, ayaa la arkay isagoo dhulka ku dhacay.
Waxaa xigay ayadoo la maqlay cod afka Hebrew ah oo amaanaya qaabka toogashadu u dhacday. Ka dib koox dad ah ayaa ku xoomay ninkii dhulka yaallay.
Milatarigu waxay sheegeen, in toogashada oo sida muuqata ka dhacday xudduudda ay Israa'iil la leedahay marinka Qasa, laga yaabo inay dhacday dhowr bilood ka hor.
Kiiska ayaa yimid ayadoo xiisadda Qasa ka jirta ay kacsan tahay.
Israa'iil ayaa wajahaysa dhaleeceyn isa soo taraysa oo la xiriirta inay toogatay tobanaan qof oo Falastiiniyiin ah, qaarkoodna ay darnaayeen, intii ay socdeen isku dhacyo ay dad banaan baxayey ka dhigeen xuduudda todobaadyadii la soo dhaafay.
Isku dhacyo maanta mar kale ka qarxay Qaza
Israa'iil ayaa difaacday ficilladeeda, ayadoo sheegtay in rasaas nool ay u adeegsatay oo kaliya shakhsiyaad isku dayayey inay ka soo gudbaan darbiga xuduudda, ama kuwa adeegsanayey hub iyo waxyaabaha qarxa.
Yehuda Glick oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Likud ayaa ku tilmaamay in "Fiidiyowgu yahay mid ay adag tahay in la daawado. Waa mid laga naxo oo laga xumaado" ayuu yiri.
Koox reer Israa'iil ah oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqul insaanka, B'Tselem, ayaa sheegtay in kalsooni aad u yar ay ku qabaan baaritaanka milateriga Israa'iil.